Non classé Archives - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 20 FEBROARY 2022 “MITANA NY TENINY NY TOMPO”
Ivombokatry ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP)
« Paoly, mpanompon’Andriamanitra sy Apostolin’i Jesosy Kristy hampandroso ny finoan’ny olom-boafidin’Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, »
Eo amin’ny sehatry ny FJKM dia Alahadin’ny Arsiva ny andro anio ary alahady fahafito manaraka ny Epifania. Andrianasy Fanja, Diakona, Filohan’ny VMFP, no nitarika ny fotoana ary ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izany.
Nandray vahiny ny Fitandremana anio, ny Mpitandrina Lazandrainy Martin, mpampianatra eo amin’ny Toeram-Pampianarana Mpitandrina, TPM Fianarantsoa, izay nitondra ny hafatra ihany koa. Natolotra mialoha izy, amin’ny maha litorjia endriny fahatelo ny fotoana.
Teo am-pitsanganana no nanao ny fiderana an’Andriamanitra ny Fiangonana tamin’ny famakiana ny Salamo 84:1-2 ; 11-12. Nohiraina ny FF 13 « Mihira fihiram-baovao » taorian’izany.
Natao avy eo ny vavaka sy ny fisaorana. Nisaotra ny Tompo ny mpitarika, noho ny fahatratrarana izao fotoana izao, nidera sy nitsaoka Azy.
Nisy ny feon-java-maneno rehefa vita izany.
Manitra Pulchérie Felaniana, mpampianatra ao amin’ny K5, no nitondra ny hafatra. Nanomboka tamin’ny vavaka ny mpitarika. Nanamarika ny herinandron’ny fianakaviana isika ka ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka no noresahina.
Kolosiana 3:20 « Hianareo zanaka, maneke ny tomponareo … ».
Notohizany tamin’ny tantara izany. Nangataka hono ity zanany mba tsy helingelenina rehefa milalao, fa avela hanao izay tiany aloha ary tsy ho antsoina hoe « Ndao hisakafo » na hoe « Ndao hianatra amin’izay ». Eny ary, hoy ireto ray aman-dreniny. Ny rainy dia nilaza koa hoe : « Aleo tsy hiasa intsony fa hijanona ao an-trano foana ». Ny reniny koa dia nilaza fa « Aleo handeha hiala sasatra foana fa tsy hikarakara tokantrano intsony ». « Tsy mety indray izany » hoy ity zanany, satria dia tsy hisy hikarakara sy hamelona izy raha izany no mitranga.
Manana ny anjara toerany ny tsirairay ao an-tokantrano. Ny ray aman-dreny natao hitaiza, hikolokolo hanabe ny zanany, ary ny zanaka natao hanaiky izay lazain’ny ray aman-dreny.
Nitsangana ny Fianakaviamben’ny Sekoly alahady ka nanao ny hira FFPM 761:2 « Maniry izahay Jesoa » ary narahiny vavaka izany.
Natao ny hira FFPM 226 « Tompo ô, mba te hihaona » ho fanomanana ny amin’ny vakiteny sy handraisana ny hafatra.
Ny diakona Rakotomalala Harizo no nanao ny vavaka, Ramahandry Hanitra no namaky ny Testamenta taloha ary Rakotonarivo Sitraka kosa no namaky ny Testamenta vaovao.
Ny perikopa anio dia ny Nomery 23 : 16 – 24, Jaona 16 : 19 – 24, Titosy 1 : 1 – 4.
Natao ny hira FFPM 176 : 1, 2, 3 « Avia Fanahy masina » mialoha ny toriteny.
Natomboka tamin’ny vavaka ny hafatra izay nentin’ny Mpitandrina Lazandrainy Martin, izay nisolo toerana ny Mpitandrina Rakondramanana Jaona noho ny tsy fahafahany.
Ny boky ao amin’ny no Titosy 1:1-2 : « Paoly, mpanompon’Andriamanitra sy Apostolin’i Kristy hampandroso ny finoan’ny olomboafidin’Andriamanitra …. » nitondrana ny hafatra.
Ny VMFP, dia vondrona hampiraisana ny hery ao amin’ny Fiangonana, mba tsy hisy hiteny intsony hoe « Andraso eo i Paoly ». Ny olona rehetra dia samy tokony hitondra ny anjara birikiny avokoa satria samy manana ny fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra.
Manome ohatra mihitsy i Paoly eto, izy izay mpanompon’Andriamanitra. Izy eto dia « à la disposition » an’Andriamanitra ».
Paoly dia nanaiky fa tsy nisy izy raha tsy teo Andriamanitra ary vonona hanao izay hampanaovin’ny Tompo azy na inona na inona.
Paoly, raha tena ara-bakiteny dia andevon’Andriamanitra. Tokony tsy hanana fitsaharana ny fanaovana ny asan’Andriamanitra satria izy no mpanompo. Mandra-pahatapitry ny baiko dia manatanteraka asa foana.
Eo anatrehan’Andriamanitra dia tsy afaka miteny izay maha izy anao akory ianao, satria dia mpanota eo anatrehany.
Ny olona tena manolo-tena dia manafoana ny tenany, ka manaiky izay iraka ampanaovin’Andriamanitra. Nataony ohatra ihany koa moa ny tantaran’i Maria, renin’i Jesoa. Izy dia nanaiky ho « à la disposition » an’ny Tompo ny amin’izay ilan’ny Tompo azy.
Betsaka ny olona no miandry fotoana vao hanaraka sy hamaly ny andron’ny Tompo nefa dia an’Andriamanitra avokoa izay rehetra momba anao rehetra.
I Korintiana 15:9-10 : « Fa izaho dia ambany indrindra amin’ny Apostoly ka tsy mendrika hatao hoe Apostoly, satria efa nanenjika ny fiangonan’Andriamanitra aho ».
Ny tanana, ny tongotra, ny fanomezam-pahasoavana hanananao dia an’Andriamanitra avokoa. Mila manatona ny Tompo ianao satria maro ny asa tokony hotanterahina. Ndao hiasa, hoy ny Mpitandrina.
Nilaza tantara niarahany tamin’ny olona iray, izay nanana fikasana marobe, moa ny Mpitandrina. Narary teo am-pandriana anefa ilay olona. Maty izy avy eo, ka tsy nisy tanteraka ny fikasana rehetra. Tokony hanararaotra hanao ny asa isika dieny mbola afaka manao izany.
Tokony hampiasa ny « moyens » rehetra isika hanaovana ny asany dieny mbola afaka manatanteraka izany. Ny herin’Andriamanitra dia miaraka aminao foana rehefa mazoto ianao manatanteraka ny asany.
Raha tanteraka izany hoy ny Mpitandrina dia tena Amparibe Famonjena tokoa isika, mendrika izany anarana entintsika izany.
Ndao hitory ny Filazantsara, hoy ny Mpitandrina ka hanatanteraka ny baikon’ny Tompo. Tsy voatery hieritreritra ny hafa foana, raha te handroso. Raha olona vitsy no manaiky hanaraka ny Tompo dia misy vokany lehibe izany, na eo amin’ny Fiangonana na eo amin’ny firenena.
Ny tanjon’i Paoly koa dia ny hampandroso ny finoana ho an’ny olom-boafidin’Andriamanitra.
Ilay talenta hanananao ka hampiasainao, dia mety hanova ny fon’ny olona. Mety io no ampiasain’Andriamanitra hanatanterahina ny asany.
Ny tanjona dia ny hahatonga ny olona handroso amin’y finoana ka hanana ny fiainana mandrakizay.
Sarobidy ny fiantsoana sy ny hifidianan’Andriamanitra anao, mba ho ianao ilay mpanompo mahatoky sy mandova ny fiainana mandrakizay. Firy taona no naha Mpandray anao? Naha diakona anao? Fa firy no voataonanao hanatona ny Tompo ?
Mila mitandrina isika ny amin’ny fitondrantenantsika, sao manko isika indray no hampihemotra ny hafa ka mila tandrovina izany.
Zakaria 8:23b » …mba handeha hiaraka aminareo izahay; fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra ».
Misy tokoa mantsy ny olona mijery anao, ary dia manapa-kevitra fa hanara-dia ny Tompo noho ny fahitany ny momba anao. Mety maloto fiteny sy fisainana ny olona iray, ka mampihemotra ny hafa ny amin’ny fanatonana ny Tompo. Mety ho fitafy, na zava-pisotro dia mety hampiova fo ny olona iray.
Araraoty izay azo atao dieny mbola afaka manao izany ianao, mba hahatonga ny olona hanana ny fiainana mandrakizay. Ianao izao ilay mpiara-miasa amin’Andriamanitra, ka dia tontosay ny baikony ary ataovy tanjona izany.
Noho izany sitrapon’Andriamanitra izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Andriamanitra mitana ny Teniny ny Tompo, ka tokony hanolo-tena isika hoy izy tanatin’ ny vavaka, mba hahatanteraka izany. Nifona izy noho izany fitondrantena tsy mendrika sy tsy fahatanterahin’izany baikon’ny Tompo izany.
Natao ny hira FF 37:3 « Ny fisainanay izay kely « taorian’izany.
Nanonona ny Teny famelan-keloka ny mpitarika izay nalaina tao amin’ny Jaona 5 :24 ; Jaona 3 :1 ; Romana 8:1 ; Efesiana 2:8 ; Romana 6 :23b.
Natao ny hira FFPM 36:1 « Moa ho haiko tantaraina » ary niara-nanonona ny Fanekempinoana laharana fahatelo ny Fiangonana.
Nanao ny tatitry ny asa vita Rajaonah Rovatiana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
– Fandraisana anjara amin’ny lahatsoratra gazety Taratry ny Famonjena (Kabary, Fanomezam-pahasoavana, Pejin’ny fahasalamana…),
– Tafika masina tany Ambohipiara sy teto anivon’ny Fiangonana,
– Fiandrasan-draharaha ara-pahasalamana,
– Nanohana ny TPM Fianarantsoa,
– Nandrindra ny hetsika nandritra ny herinandrom-bokatra 14/02 hatramin’ny 20/02.
Ireo asa miandry kosa dia anisan’ny voalaza ireto manaraka ireto :
– Velankevitra hiadiana amin’ny zava-mahadomelina,
– « Cours de soutien » ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana,
– Fizarana traikefa samihafa.
Nanatanteraka ny hira fanevany ny VMFP niaraka tamin’ny AKAFITA (Akany Fitaizana Tangaina)
Nanambara ny raharahan’ny Fiangonana ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
– Foibe Fjkm : fotoam-pivavahana manoloana ny voina samihafa, FJKM Andrainarivo,
– Ivon’ny faha 200 taona nahatongavan’ny misionera, talata 2ora30 eny Ambohidratrimo,
– Ny rakitra sy voady ary adidy isan-karazany dia nahatratra 4 262 400 Ar.
– Ny AFF dia nanao taratasy fisaorana fa tontosa soa aman-tsara ny fankalazana ny « Mpivady mifankatia ». Nisy ny asa vavolombelona, ny zaza Radimiarilalao Sandriana no nandray ny sakramentan’ny Batisa.
Nisaotra ny VMFP noho ny herinandro Mpivady mifankatia. Niarahaba ny AKAFITA (Akany Fitaizana Tangaina) izy ary indrindra ireo ray aman-dreny mpitaiza. Manentana ny Mpandray hanohy ny fahalalana ny amin’ny Baiboly sy finoana : Setela, Fitela. Nanentana ny hitondra amim-bavaka ireo komity manao fankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerintaona.
Roa no voady voaray izay nangataka ny hira FFPM 808 : 1 « Eo an-tratranao Jesosy » sy ny FF 48 : 1 « Andriamanitra fitiavana ».
Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 45 : 4 : »Ry Tomponay mandraisa »
Nanao anjara hira ny AKAFITA taorian’izany.
Natao ny hira FFPM 808 : 2 « Mampifaly ahy koa » sady nandroso ireo fianakaviana sy ny zaza hatao Batisa, Radimiarilalao Sandriana Andriatsiavonana. Ny ray aman-dreniny ihany no niantoka azy.
Nanao ny anjara hirany ny STK « Misaotra anao » taorian’izany.
Natao ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra noho ny Teny sy ny hafatra ny Mpitandrina. Mila mianatra ny apostoly Paoly izahay, hoy izy, mba hampandroso ny finoana.
Mba hahatanteraka ny vina « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara » dia tokony hanatanteraka izany hafatra izany izahay, hoy ny Mpitandrina tao anaty vavaka.
Netina tamim-bavaka ny Arsiva FJKM, izay mitahiry ny maha izy azy ny FJKM, mba ho fantatry ny taranaka fara mandimby ny tantarany. Nentina tamim-bavaka ny Mpitandrina izay nitondra ny hafatra ; toy izany koa ny hafatra nozaraina mba tsy ho very maina. Nentina tamim-bavaka ny VMFP, ny akany Fialofana Tangaina izay miara- manatrika ny fotoana. Nentina tamim-bavaka ny tomponandraikitra, ho tena akany Fialofana tokoa ny asan’ny Fiangonana. Nangatahina ny hiverenan’ny kristiana ato amin’ny Fiangonana ary nentina amim-bavaka ireo traboina.
Natao ny hira FF 16 : « Tsy izany no ilaina ». Novakiana ny tondrozotra, ary natolotra ny tsodrano. Natao ny andininy faharoa tamin’ny hira FF 16. Nofaranana tamin’ny Trinite Masina izany.
Naka sary : Randriamampianina Faneva
MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY
Alahady ivom-bokatry ny SAFIF
“Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo; ka nony efa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako...” Marka 14:22-25
Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny Masina indray androany Alahady faha 24 Oktobra 2021. Ity no Alahady natokana eto amin’ny sahan’ny FJKM ho alahadin’ny SAFIF. Ho antsika eto amin’ny Fitandremana FJKM AMPARIBE MANOKANA dia ity no fotoana nanatanterahana ny ivom-bokatry ny Sampana ary nanamarihana ny faha 30 niorenan’ny Sampana Fifohazana teto amin’ny Fitandremana. Alahady faha 21 manaraka ny Trinite ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe : “MIOREANA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY”.
Ny Filohan’ny Sampana Fifohazana , Atoa ANDRIANARY Rado no nitarika ny fanompoam-pivavahana;
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTO FANJARIVELO Perle no nitory ny tenin’Andriamanitra.
FANOMBOANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA.
Teo am-panomboana dia nasandratra ny Hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena.”FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY”.
Teo amin’ny fitarihana izao fotoana izao dia mbola nampahatsihivin’ny mpitarika tao anatin’ny fiarahabana ny Fiangonana fa
ity no alahady ivom-bokatry ny sampna SAFIF ary ivon’ny fankalazana
an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenan’ny Sampana.
Ny litorjia faharoa fanaon’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.
Nisy ny Asa sy fampaherezana notanterahan’ny SAFIF nandriatry ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona.
Ny SALAMO faha 117 no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ Miderà an’i Jehovah ry firenena rehetra; Miderà Azy, ry olona rehetra.
Fa lehibe ny famindram-pony amintsika; Ary mandrakizay ny fahamarinan’i Jehovah. Haleloia.
Natao ny HIRA SAFIF 10 and. 1, 3 ”Asandrato Havo re ny Hiranao” ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitrra
Tamin’ny vavaka nasandratry ny Fiangonana ho fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra no nanambaràna fa ilay Andriamanintsika dia ilay Andriamanitra Ray , Zanaka ary Fanahy Masina. Izy no Isaorana noho ny nanomezany antsika izao fotoam-bavaka izao ka dia deraina sy ankalazaina ny Anarany Masina. Misaotra ny Tompo noho ity fotoana ity . Misaotra noho ny fitahiana sy ny fitantanan’ny Tompo. Izay rehetra ho tanterahina eto anie dia ho voninahitry ny Tompo ihany.Misaotra fa handray ny fampaherezana avy amin’ny Tompo koa isika.
Tao anatin’izany ihany koa anefa no nanehoan’ny Fiangonana ny fangatahana ny famelankeloka sy ny hanatrehan’ny Tompo izao fotoana izao .
Ratoa RAJAOFETRA BAKOLY mpampianatra ao amin’ny K5 no nitondra ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady.
Ny teny araka ny 1 Petera 5:2a » Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay ao aminareo. » No nitondrana ny fampianarana.
Ity teny ity dia mahakasika indrindra ireo mpampianatra Sekoly Alahady fa indrindra amin’izao fiandohan’ny taom-pianarana izao.
Miandry ny ondry tsy an-tery fa an-tsitrapo, tsy amin’ny fitiavana harena maloto, tsy mpanavakavaka izany hoe manana ilay toetra araka an’Andriamanitra . Ireto misy toetra efatra : miandry ny ondry amim-pitiavana , amin’ny fahalemem-panahy, amin’ny fandeferana ary amin’ny fanetren-tena.
Mila fiomanana sy fanomanana ihany koa ny asa fampianarana.
Natao ny hira FFPM 784 : 3-4 “mpiandry ondry mora mba tahionao”
Mbola nisy ny vavaka izay nisaorana an’Andriamanitra noho ny Sampana Sekoly Alahady izay niorina efa ho zato taona mahery teto amin’ny fitandremana. Nisaotra ny Tompo noho ny teniny izay manefy sy mampianatra ny Fiangonana isan’andro. Tehirizo eo ambany elatrao izahay ondrinao mba tsy hisy ho very izahay na dia ho iray aza.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny HIRA SAFIF 205 and 1 , 2 “Ranon’aina izay tena mateza”
Ny nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny Atoa RAKOTO Hajaniaina Ginot,
Ratoa RAZAFINDRAKOTO Tatamo, kosa no namaky ny Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny Eksodosy 24 and 1 -11. Ny namaky ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily dia Ratoa RAMANANJOELINA Patricia . Ny teny novinaky dia araka izay hita ao amin’ny filazantsara araka ny Marka 14 and 22-25 ary ny Romana 15 and 25 -29.
Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny Hira SAFIF 328 and 1 “ Ny Antsonao Andriamanitra ô!“ rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTO FANJARIVELO Perle no nitondra ny tenin’Andriamanitra tamin’ny fitoriana izany.
Tamin’ny voalohany dia niarahaba manokana ny SAFIF izy noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taonan’ny Sampana ary koa sady ivom-bokatra rahateo izany.
Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIORENA AO AMN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY” isika ankehitriny.
Ny marka 14:22-25 no nitondrana ny hafatra. Nanaon fanasana ny mpianatra ny Tompo. Hafakely anefa ity fanasana ity satria tamin’ny fotoan’ny Paska no nanatanterahana azy dia ilay fotoana fankalazana ny nanafahan’Andriamanitra ny Zanak’israely teo amin’ny tanan’ny egyptiana. Raha nanao izao fanasana izao ny Tompo dia mampahatsiahy fa an’Andriamanitra irery ny fanafahana ny olony izay hotanterahina amain’ny alalan’i Jesoa Kristy.
I-NY MIORINA AMIN’NY FANASAN’NY TOMPO DIA MINO , MANDRAY NY TENAN’I JESOA.
and. 22 “…raiso ity ny tenako”.
Ny hoe Jesoa nandray ny mofo dia noraisin’ny Tompo ho andraikitra ny fanafahana ny olona. Na dia sarotra aza ny miandry ny Tompo dia nataony am-pitiavana izany asa nanirahan’ny Ray Azy izany.
Rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra an’Andriamanitra. Jesoa Krity misaotra noho ny asam-panavotana antsika.Noho ny amin’i Jesoa no nahariana antsika. Isika dia sarobidy eo amin’i Jesoa. Na dia mety hiaran’ny zavatsarotra aza ny Tompo dia nekeny am-pitiavana izany.
Ilay hoe mamaky ny mofo dia maneho fa ho rovidrovitra sy ho rotidrotika izy mba hananan’ny tsirairay anjara amin’ny tenan’i Kristy.
Ilay hoe mandray ny mofo dia maneho fa lasa miombom-piainana amin’i Jesoa ny mpianany ary miombona amin’ny asam-panafahana ataon’i Kristy.
Aza hadinoina fa rehetra mandray ny tenan’i Kristy isika dia miombona amin’i Kristy isika, miombona fahoriana sy fijaliana amin’i Kristy isika, fa miombona nadraikitra sy ny asa fitorina , ny asa famonjena , ny asam-panafahana.
Amin’ny fanatanterahana izany asam-panafahana izany dia Ireto misy zavatra telo tsy maintsy atao :
1- Fiombonam-piainana amin’i Jesoa
Rehefa amin’ny fotoan-tsarotra ve mbola tafaraka amin’ny Tompo ihany isika.
2- Mitory ny filazantsara amin’ny olona rehetra.
Isika no mila manambara ary mila tohanana ny asa fitoriana ny filazantsara
3- Roahy ny demonia
Ny lioka 11:20 : ny fandroahana ny demonia dia manambara ny fahatongavan’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anjarantsika no mandray ny fahefana izay efa natolotry ny Tompo antsika.
Ny lohahevitra noraisin’ny Sampana Fifohazana amin’izao taon-jaobily izao dia ny ao amin’ny isaia 60 :1 “mitsangana , mihazavà fa tonga ny “.
Mazotoa mandray ny fahazavan’i Kristy, mandinika ny Soratra Masina.
II – NY MIORINA AMIN’NY FANASAN’NY TOMPO DIA MANDRAY NY KAPOAKA SY MISOTRO NY RANY
and:23. Raha nandray ny kapoaka ny Tompo dia nandray ny “coupe” Izy. Ny olona mpandresy no mandray ny “Coupe” saingy eto anefa dia mbola tsy vita ny ady saingy kosa efa any Aminy ny fandresena.
Ny hoe “sotroinareo ity” dia maneho izany fa efa zarain’i Jesoa amintsika ilay fandresena.
Ny Isaia 51 and. 17 dia manambara fa Jesoa rehefa nisotro ny kapoaka Jesoa dia Izy no nisotro ilay farany tavela tao anaty kapoaka, ilay nisy fakofako sy faikafaikany tavela ao anaty kapoaka. Izy no nisotro ilay mangidy indrindra.
Ny hoe “Misotro ny ran’i Kristy” dia manambara ilay fanekena vaovao aton’ny Tompo amin’ny olony. Ny rà dia manambara fanafahana ary manambara ihany koa fa mitoetra ao anatin’ny rà ilay toetran’ny olona nanome sy manolotra izany . Ny fanoloran’ny Tompo ny rany dia famindran’ny Tompo ny toetrany ho lasa toetrantsika.
Raha aravona ary dia efa nomena antsika ny fandresena. Mikoriana ao anatintsika ny ran’i Jesoa, ilay ràn’ny Mpandresy. Jesoa no efa nitondra fandresena ho ahy sy Ianao.
Taorian’ny toriteny dia nanatontosa ny anajara hirany ny HIRA RFF :”venteso ny Hoby” !
Izao raha fintinina ny vavaka nataon’ny mpitarika manoloana izany tenin’Andriamanitra izany :
”Tsy mitsahatra manambara ny sitraponao aminay Ianao.Nambara taminay fa ny mandray ny fanasanao dia miombona Aminao, mandray Anao,tsy tanteraka tamin’izany anefa izahay fa izay sitraponay ihany no nataonay. Tsy mendrika izahay.
Irahinao izahay hitory ny filazantsaranao, ny rehetra izay nandray ny famonjena hitondra izany amin’ny hafa nefa tsy nahatanteraka izany izahay, koa mifona Tompo ô! .
Ny miombom-piainana Aminao dia tokony ho manana fiainan’ny mpandresy nefa tsy izany izahay.
Efa nomenao anay ny fahefana , handroaka ny demonia. Izahay aza mifandringana .
Misaotra ny amin’ity fotoana ity izay nanirahana ny mpanomponao hitory ny fanafahana taminay sy nanambara ny hanananay fahazotoana amin’ny asa fitoriana.
Andriamanitra be fitiavana ,mpamindra fo sady maharim-po Ianao Andriamanintra ô! koa na aiza na aiza misy anay sy alehanay dia iombom-po Aminao izahay.
Taorian’ny vavaka dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambaràna ny FANEKEM-PINONA faha 4 ny Fiangonana.
TATITRY NY SAFIF
Ratoa YASMINA BODOVOAHANGY no nantanteraka ny tatitra.
Ny SAFIF dia mifampahery amin’ny vavaka ,ary niasa mandrakariva na dia tao anatin’ny fihibohana aza. Miara-miasa aminy sampana velona eto amin’ny Fiangonana.
Nisy ny fiofana samihafa izay notanterahan’ny Sampana.
Nanatanteraka ny Tafika Masina tany Bevoy sy Manjakandriana .
Taorian’ny famakiana ny tatitra dia novakiana ny HAFATRY NY FOIBE:
Misaotra ny Tompo noho ny fitondran’ny Tompo ny Fiangonana.
Nanatanteraka ny hirany ny Sampana rehefa izany tamin’ny alalan’ny Hira SAFIF 144 “Iza vajiny malala”
AMPARIBE FAMONJENA / MAHATAHIRY NY FINOANA / MIFANKATIA ARY MIASA AMIN’NY FAHAZOTOANA.
Atoa RAZAFIMAHARO Mamy no nanatanteraka ny fanambarana ny Asan’ny Fiangonana .
Ny teny fanevan’ny faha 160 n’ny Fiangonana no nentiny niarahaba ny Fiangonana.
Vita ny fanavaozana ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Foibe FJKM.
Manentana ny kristiana FJKM rehetra mba hivavaka tsy mitsahatra.
Hotontonsaina anio hariva ao anatin’ny hetsika fankalazana ny faha 160 taonan’ny fiangonana ny hetsika hoe: “Diam-penin’i Rado”
Hanatanteraka ny fitsidihana ny TPM isika ny 29 oktobra ka hatramin’ny 01 Novambra 2021.
Nisy ny Solontenan’ny SMZM nanao fanentanana noho ny herinandrom-bokatra amin’io herinandro vao mitsidika io.
BATISA : HARENTSOA Anaelle Melodie an’ny Avo. 05 jona 2020 , zanak’i Harentsoa Rova sy Andrianarivo Finoana.
Raha nandray fitenena kosa ny NY MPITANDRINA dia niarahaba ny Sampana Fifohazana noho izao fanateram-bokany izao. Nanentana ny fanomezana ho entina any amin’ny TPM Fianarantsoa.
Nisy ny fiarahabana ny zanaky ny Fiangonana izay niroso tamin’ny fanambadiana dia tsy iza fa :
RAZAFINDRALAMBO Zo Ranto Hanitra sy RAKOTOMAVO Mialy Christelle ary
RASAMIMANANA Ianja Andriamaholy sy ANDRIAMANANA Sambatra Lucia
Atoa RALAINDIMBY Haja no namaky ireo voady sy
ny mahatsiaro ny fitahian’ny Tompo taminy sy ny ankohonanay.
ny fianakaviana iray izay mandalo fotoan-tsarotra ka mangata-bavaka amin’ny
ny nanolotra ny fahafolon-karenany.
ny nisondrotra tamin’ny fianarany avy ny zanany telo mirahalahy.
Ireto no hira nangatahan’ny
olona Hira RFF “Ianao no heriko” , Hira 430 : 1/ Hira 515 : 1 / “Misaotra anao ‘zahay
Ny HIRA 109 : 4 “Indro Tompo
fa omeko” no notanterahina ho fanolorana
Teo amin’ny vavaka
fangatahana dia nisy ny fisaorana ny Tompo fa tanteraka ny fanompoam-pivavahana
androany . Apetraka amin’ny Tompo ireo
olona izay nangata-bavaka sy nanao voady.
Notanterahina ny Hira 312
and 1,2 ary taorian’izany no natao ny Tondrozotra 2018 . Nisy ny tsodrano ary
ny Hira 312 and 3 no namaranana ny fotoana.
NY DERA SY NY LAZA ANIE HO
Sono : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto/
Sary : RAMAHERY Hasina
Orga: RANAIVOSON Jacky.